Ra’iisul wasaare Cumar oo ka hadlay socdaalkii uu ku tegay Kismaayo iyo New York – Radio Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke oo socdaal dibadda ah ku maqnaa ayaa maanta dib ugu soo laabtay, iyadoo uu socdaal ku soo maray magaalada Kismaayo ee xarunta Maamulka Jubbaland.
Mudane Cumar Cabdirashiid oo Warfidiyeenka kula hadlay garoonka Aadan Cadde ayaa sheegay in shirkii uu uga qeyb galay magaalada New York ee xarunta u ah Qaramada Midoobay uu guul ku soo idlaaday, isla markaana uu kulamo la qaatay Madax ka tirsan dowladda Mareykanka.
“Waxaan safar ku gaaray xarunta Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay, waxaana looga hadlayay in dib u eegis lagu sameeyo hadafyadii ciidamada isku dhafka ah ee ka howlgalla dalka iyo waxyaabihii ka qabsoomay, intaas kadib waxaan u gudbay Washington oo aan kula kulmay Madax kala duwan oo Mareykanka ah oo aan kala hadalnay, xaaladda dalka, iyagoo noo balan qaaday, in ay gacan ka geysanayaan geedi-socodka Soomaaliya” ayuu yiri Ra’iisul wasaaraha.
Ra’iisul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa socdaal ku soo maray magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose, halkasi oo uu kulamo kula soo qaatay Madaxda Maamulka Jubbaland oo ay isla meel dhigeen xalinta arrinta ku aadan Wakiilada Maamulka Jubaland.
“Markii aan Kismaayo tegay, waxaan Madaxda kala hadalnay arrinta Wakiilada ee tabashada ka taagan, in la soo celiyo kalsoonidii iyo xiriirka dowladda ay la leedahay Maamul Goboleedyada, waxaana ku casuunay inay Muqdisho yimadaan, oo arrimaha dhiman isla meel dhigno, Xukuumadda waxaa ka go’an hirgelinta Nidaamka Federaalka ah” ayuu hadalkiisa ku daray Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.